Shiinaha ahama bir Xadhig mesh Green Wall for fuulitaanka dhirta warshad iyo alaab | Boegger
Xadhigga Mesh Green Wall wuxuu Caawinayaa Qurxinta Deegaanka
Dahaarka birta ah ee birta ah ee birta ah waxay aad ugusoo caan baxeysaa dhismayaasha casriga ah waxayna noqotay qaab cusub oo lagu keydiyo sanadihii ugu dambeeyay. Marka waa maxay darbiga cagaaran birta birta ah ee birta ah? Darbiga cagaaran birta birta ah ee birta ah ee birta ah waa in dadku ay u isticmaalaan mesh xarig ah birta birta ah si ay ugu beeraan dhirta cagaaran derbiga ama dhismooyinka waaweyn. Derbiga cagaaran ee birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah waxay siisaa xalka bey'ada u habboon oo waara loogu talagalay xirfadleyda qaabeynta dhismaha iyo dhismaha. Nashqadeeyayaashu waxay run ku noqon karaan noocyo cusub oo cusub oo ku saabsan dhismaha dhismayaasha iyagoo gacan ka helaya mesh bir bir ah oo birta ah.
Xarig mesh derbiga cagaaran
Xarig xarig mesh silig miskaha ah
Darbiga cagaaran ee birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah ayaa ku siin kara tiro badan oo faa'iidooyin ah hoosta:
Wax tayo leh - Ka samaysan tayo sare leh 316 ahama, noocyada kala geddisan ee cagaaran way adag yihiin, qurux badan yihiin laakiin qafiif yihiin. Waxay yihiin 100% dib loo warshadeyn karo, aad ugu adkaysata daxalka oo wax yar ama dayactir looma baahna. Inta badan dhammaantood, waxay muujisaa nolol aad uga dheer alaabooyinka la midka ah ee suuqa ka jira.
Qaab dhismeedka waara - Qaabdhismeedka qallafsan wuxuu ka kooban yahay karti xamuul sarre leh iyo iska caabbinta dabaysha culus iyo barafka. Waxay ku habboon tahay qaabka 3-D ee bixinta naqshad la yaab leh oo dabacsanaan ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay waxqabad fiican xitaa cimilada kulul maaddaama xariggu uusan nuugin kuleylka iftiinka leh.
Faa'iidooyinka deegaanka ee cagaaran - Loogu talo galay in lagu taageero geedaha canabka ah ee ugu xoogga badan, kuwaas oo soo saara oksijiin si loo yareeyo saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo.
Xakamaynta kuleylka & acoustically ningax - Waxay habeysaa heerkulka dhismahaaga iyadoo hoos looleynayo sagxadaha derbiga, waxay yareyneysaa isticmaalka tamarta ee dhismahaaga sidoo kale waxay yareysaa buuqa si wax ku ool ah.
Faa'iidooyinka bulsho & nafsi - Wajiyada cagaaran ee biraha ahaanta leh ee dhirta fuulitaanka nool waxay qabtaan indhaha dadka sidoo kale waxay dareemaan raaxo badan.
Codsiyada ballaaran - Noocyadeena kala duwan ee biraha cagaaran ee birta ah ayaa lagu dabaqi karaa dhisme kasta ama goobo kasta, sida micro-garden, garoonka iyo garaashka gawaarida la dhigto.
Si fudud loo rakibo - Mesh-ka birta birta ah ee fudfudud ee birta ah wuxuu u baahan yahay ugu yaraan qalabka marka la rakibayo.
Hawl fudud - Nidaamka cagaaran ee fudud wuxuu oggol yahay xakamaynta iyo jarista dhirta fudud. Intaa waxaa sii dheer, wajiyadda cagaaran qayb ahaan ayaa looga saari karaa dayactirka dhismaha ee ku habboon isbeddelada xilliyeed.
Xarig mesh derbiga cagaaran 01
Faahfaahinta Darbiga Cagaaran
Qalabka xadhigga: ahama tayo sare leh 304, 316, 304L iyo 316L.
Dhexroor xarig: 1.2mm ilaa 3.2mm, iyo dhexroorro kale oo xarig ah ayaa sidoo kale la heli karaa.
Dhismaha xargaha: 7 × 7 iyo 7 × 19 ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee la isticmaalo, laakiin 1 × 7 iyo 1 × 19 ayaa sidoo kale la bixiyaa.
Cabbirka furitaanka: 25mm × 25mm ama 76mm × 76mm, iyo cabbirro kale ayaa la bixiyaa iyadoo lagu saleynayo baahida macaamiisha.
Nooca mesh: birta birta ah ee birta birta ah ee birta ah ama birta birta ah ee birta ah.
Qeexitaanka birta birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah
Xeer Dhisida xargaha Dhexroor xarig ah Furitaanka
Inji mm Inji mm
Xarig mesh sawir muuqaal cabbir diiran.
Hore: Daaha Birta Bead - Qaybiye Aad U Fiican
Xiga: Dahaarka birta oo daloolsan ayaa dhismaha ka ilaalinaysa waxyeelada cimilada